दुई दिन, भित्र तपाईंको काम ब’न्नेछ बि’ल्कुलै बे;वास्ता नगरि दे’ख्ने बि’त्तिकै ॐ लेखी सेयर गर्नुहोला। – Sandesh Press
दुई दिन, भित्र तपाईंको काम ब’न्नेछ बि’ल्कुलै बे;वास्ता नगरि दे’ख्ने बि’त्तिकै ॐ लेखी सेयर गर्नुहोला।
December 31, 2020 253
परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् । सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्र’मबाट बच्नुहोस्ः
लिं’गको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ ।शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिं’गको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्रीलिं’गको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छआखिर के हो त शिवलिं’ग ? शुन्य, आकाश, अनन्त, ब्रह्माण्ड र निराकार परमपुरुष भएकाले यसलाई लिं’ग
भनिएको हो । स्कन्दपुराणमा आकाश स्वयंम लिं’ग हो भनिएको छ । शिवलिंग वातावरणसहित घुमिरहेको धर्ति तथा सारा अनन्त ब्रह्माण्डको अक्ष धुरी नै लिं’ग हो । शिवलिं’गको अर्थ अनन्त हुन्छ । अर्थात यसको कुनै सुरुवात पनि हुन्न र अन्त पनि । शिवलिं’गको अर्थ लिं’ग वा यो’नी होइन। पुरा भिडियो हेर्न तलको बक्समा क्लिक गर्नुहोला
काठ्माण्डौ – मानिसहरुको विश्वास छ कि जन्मेको महिना, गते, समय अथवा पलले मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । यसका साथ-साथै दिनको असर पनि जीवन र व्यक्तित्वमाथि हुने गर्दछ त्यसकारण त आजकालका मानिसहरु आफ्ना बच्चाको जन्म यो दिनमा होइन, यो दिनमा गराउनुस् भनेर डाक्टरहरुलाई आग्रह गर्ने गर्दछन् ।भारतीय अंक ज्योतिष श्रीमती ज्योतिमा शर्माले मंगलबार जन्मेका व्यक्तिहरुको निम्नलिखित गुणहरु बताएकी
बताउनुभएको छ :– मंगलबार जन्मेका व्यक्तिहरु निकै बहादुर, स्मार्ट र एक्टिभ हुने गर्दछन् ।-यी व्यक्तिहरु अरु मानिसहरुलाई सहयोग गर्न सधैँ तत्पर रहन्छन् । उनीहरुको स्वभाव परोपकारी किसिमको हुने गर्दछ ।– यी व्यक्तिहरु आफ्नो हरेक काम निकै गम्भीरताका साथ गर्ने गर्दछन् । यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल डबल क्लिक गर्नुहोस
Prevबुवा बिदेशमा हुनुहुन्छ तपाई अरु परपुरुषसँग यसरि फोनमा गफ नगर्नुस भन्दा आफ्नै छोराछोरीलाई फा’लेर भा’गिन् कमला (भिडियो)
Nextतनहुँको मानहुँकोटमा प्रेमिकासँग मायामा यसरी लुटपुटिए सुनिल गिरी, के विबाह गर्दैछन्